England get another chance - CoventryLive
England get another chance
ZIMBABWE squandered the chance of setting a competitive total in today's final one-day international against England after a late collapse at the Queen's Sports Club....
12:30, 13 OCT 2001
ZIMBABWE squandered the chance of setting a competitive total in today's final one-day international against England after a late collapse at the Queen's Sports Club.
After recovering from seven for two with opener Grant Flower scoring a superb 104, Zimbabwe lost six wickets for 24 runs in six overs to be dismissed for a disappointing 228.
While Flower was at the crease, Zimbabwe looked on course for a far bigger total and he dominated useful stands with brother Andy, Clive Wishart and Dion Ebrahim.
But just like the previous four games in the series, Zimbabwe lost a series of wickets to a variety of ill-conceived shots to give England a chance of claiming a 5-0 whitewash in the series.
Their innings began badly after returning England captain Nasser Hussain lost his 13th successive toss and gave Zimbabwe the opportunity of batting first with Chris Silverwood, making his first appearance of the tour, claiming wickets in his first two overs to remove Alistair Campbell and Stuart Carlisle.
The Flower brothers rebuilt the innings with a determined 70-run stand in 99 balls, but just as they seemed set to launch Zimbabwe towards a significant total Andy scooped Ben Hollioake high into the air and was caught by Nick Knight running in from square leg for 33.
Without his brother's expertise, Grant had to take on the responsibility and was aided by Wishart, who combined to add 68 from 97 balls until Silverwood returned to bowl him off a bottom edge.
Ebrahim followed suit and helped forge a crucial 52-run stand, but he became the first of three victims for Jeremy Snape to begin the lower order slump.
Grant Flower fell in the next over having hit nine boundaries in his superb innings, brilliantly yorked by Andrew Flintoff, and the remainder of the innings collapsed to leave Zimbabwe in danger of losing their 12th successive defeat.